पूर्ण ओलीका २ कथा सङ्ग्रह विमोचन | Ratopati
कथाकार पूर्ण ओलीद्वारा लिखित २ वटा कथा सङ्ग्रह जितौरी र यालमाया विमोचन गरिएको छ । भद्रकाली प्लाजास्थित राष्ट्रिय महिला आयोगको भवनमा सम्पन्न विमोचन कार्यक्रममा प्राज्ञ डा.देवी नेपालको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । यसैगरी कार्यक्रम साहित्यकार एवम् साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका सदस्य हरिप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेता जनार्दन शर्माले लेखकको चरित्रचित्रण गरे । उनले भने- पूर्णजी थोरै बोल्छन्, तर धेरै सोच्छन् । बाहिरबाट झट्ट देखिएका पूर्ण वास्तविक पूर्ण होइनन् । उनलाई भित्रैदेखि अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
उनका रचनाहरु धेरै पढ्न सुन्न पाइएको र आफूले सामाजिक विसङ्गति विरुद्ध रचनाहरु सिर्जना गर्न सधैँ घचघच्याइरहेको बताए ।
यसैगरी अर्का गोपालजीजङ्ग शाहले लेखक पूर्ण ओलीको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा बताएका थिए ।
कार्यक्रमका प्राज्ञ डा देवी नेपालले लेखक पूर्ण ओलीलाई एउटा गह्रौँ पाइला उचालेकोमा धन्यवाद दिँदै ती दुवै पुस्तकहरु एकै रातमा पढिसिध्याएको बताए । उनका दुई पुस्तकमध्ये १३ वटा कथाहरु समेटिएको जितौरी कथासङ्ग्रह जुन २६४ पृष्ठको छ र १५ वटा कथाहरु समेटिएको यालमाया कथासङ्ग्रह २२१ पृष्ठको छ । उनले आफ्नो लगायत विभिन्न उदाहरणहरु दिँदै एकजना कुशल लेखक एकजना होनहार पाठक पनि हो भन्ने प्रमाण दिए ।
उनले भने- सबै औपचारिक पदहरु भुपू हुन्छन्, तर श्रस्टाहरु कहिल्यै भुपू हुँदैनन् । कृतिहरु पुराना हुँदैनन् । हामी भूपू आदि कवि भानुभक्त आचार्य भन्दैनौँ । हामी भूपु महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्दैनौँ ।
त्यस्तै गरी लेखक र लेखकका यी दुई पुस्तक साहित्याकाशमा अमर भइरहने बताए । उनले यी दुवै कृतिहरुलाई स्थानीय स्तरमा तुरुन्त समीक्षा गराई राष्ट्रिय पहिचान दिन रुकुमेली सहभागीहरुलाई सुझाए । यस्ता अरु थुप्रै श्रष्टाहरु मुलुकका कुना कन्दरा लुकेर रहेका हुनसक्ने भएकोले तिनीहरुलाई छिट्टो बाहिर निकाल्न रुकुमेलीहरुलाई घचघच्याए ।
उनले दुवै कथासङ्ग्रहमा रहेका अधिकांश कथाहरुलाई कथाको सिद्धान्तको कसीमा घोटेर विश्लेषण गरे । प्रत्येक कथाको कथापट सुन्दर ढङ्गले सिर्जना गर्दै कथाको शीर्षकले खोजेका चरित्रहरुको गजबको चित्रण गरिएको बताए । कथाको शैली र परिवेश मौलिक र स्थानीय शब्दहरुको भरपुर प्रयोग गरिएको बताए ।
यसै गरी समालोचक डा रजनी ढकालले 'जितौरी र यालमायाजस्ता कृतिहरु नेपालमा बिरलै सिर्जना भएका कृतिमध्ये पर्दछन् भन्दै कथाहरुमा सामाजिक विकृतिहरुलाई नाङ्गेझार पारिएको बताइन् । लेखक शिक्षण पेशा र सरकारी सेवामा लामो समय अनुभव सँगालेका व्यक्ति भएकोले प्रशासनिक विकृतिहरुको सवाल उठाइएको बताइन् । हरेक कथामा सुन्दर एवम् औचित्यपूर्ण बिम्बहरुको प्रयोग गरिएको बताइन् ।
उनले मुलुकका कुनाकन्दरामा हराउन थालेका यस्ता स्रस्टा र कथाहरुको संरक्षण र सिर्जनाको खाँचो रहेको बताइन् । उनले पुस्तकमा स्वाभाविक रुपमा केही शाब्दिक तथा भाषिक त्रुटीहरु रहे तापनि यति विशिष्ट कथाहरुको रचना गर्नसक्ने स्रस्टाले जानी जानी त्यस्ता गल्तीहरु गरेको हुनु नपर्ने भन्दै लेखकलाई हौस्याइन् ।
यसैगरी जितौरी कथासङ्ग्रहको सम्बन्धमा बिचार राख्दै लोक साहित्यकार मनोहर लामिछानेले जितौरीभित्रका कथाहरुको उद्देश्यको साथै कथा सङ्ग्रहले इङ्गित गर्न खोजेको दिशा र सार संक्षेपको बारेमा बखान गरे । उनले कथाहरु सामाजिक त हुँदै हुन् यथार्थवादी र मनोवैज्ञानिक समेत भएको धारणा प्रस्तुत गरे । साहित्य समाजको ऐना हो र लेखक सरकारी जागिरे भएकोले जागिरभित्रका विकृति र विसङ्गतिलाई राम्रोसँग केलाउन सकेको उनले बताए ।
लेखकीय मन्तव्य दिँदै कथाकार पूर्ण ओलीले आज नै आफ्नो स्वर्गीय छोरा परिशीलन ओलीको जन्मजयन्ती परेको हुँदा एउटा सन्तानलाई गुमाउँदा परेको असह्य पीडालाई भुलाउन एकैसाथ जितौरी र यालमाया नामका दुई सन्तान जन्माएको बताए । उनले आफू कसरी साहित्यिक महामार्गमा लागेँ भनेर बाल्यकालीन र विद्यालय कालीन रोचक एवम् घतलाग्दा प्रसङ्गहरु पनि सुनाए । उनले 'हामीले कोरेको गन्तव्य के हो ? हामी कहाँनेर अड्किएका छौँ ?' भनेर पाठकहरूलाई बुझाउन खोज्नु आफ्ना कथाहरुको उद्देश्य रहेको बताए । यालमायामा प्रेमकथाहरु नभई सामाजिक परिवेशलाई अँगाल्न खोजेको र नारी प्रधान कथाहरु रहेको उनले बताए ।
यसैगरी साहित्यकार हरि भण्डारीले लेखकसँग परिचय भएदेखि नै उनीसँग रहेको प्रतिभाको आँकलन गरी लेखकलाई आफूले सिर्जनशील कार्यमा लागिरहन उक्साएको बताए ।
राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुमकी उपाध्यक्ष सिर्जना शर्माले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेकी थिइन् भने निशा ओलीले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिएकी थिइन् ।
२६४ पृष्ठ रहेको जितौरीको मूल्य ३९० रुपैयाँ राखिएको छ भने २२१ पृष्ठ रहेको यालमायाको मूल्य ३५० रुपैयाँ राखिएको छ ।